Isitshalo "granite Ural" yasungulwa yi-PCL ngo-2005. Inhloso yephrojekthi kukhiqizwe olungaphambili lwesonto kanye izinto ingaphakathi zokuhlobisa wenza egwadle sobumba. Namuhla inkampani inikeza ehlukahlukene yasakazwa imikhiqizo ekhiqizwa kusuka izithako zemvelo nge ubuchwepheshe Italy.
Ukukhiqizwa umthamo zalesi sihlahla we egwadle Ural-MCS itholakala Snezhinsk, Chelyabinsk esifundeni. Le nkampani kuyinto eziyinkimbinkimbi yesimanje futhi enamandla zobuchwepheshe uyakwazi ukukhiqiza ezihlukahlukene injongo nokubukeka imikhiqizo omningi.
Kusukela ngo-2005 kuya ku-2010 ifektri ekhiqizwa zobumba-MCS ngaphansi AZORI brand kanye "Kerabud". Kusukela 2009, inkampani ekhiqiza imikhiqizo ngaphansi brand ayo "granite Ural." Nge kwethulwa umugqa 4th ngoJulayi 2011, umthamo sitshalo lakhuphuka lafika ku-abayizigidi ezingu-8.5 m 2 egwadle Ceramic ngonyaka. Ukuhlunga kanye ne-accounting ngobumba aphethwe osezingeni futhi amathoni, okuvumela ukuba doukomplektovyvat odlule oda imikhiqizo esicishe olufana ukuthungwa kanye nemibala.
Ngokusho ukubuyekezwa, le Ural egwadle izici futhi ngenxa yobuhle bezibona oluhambisana engcono emhlabeni analogue. Namuhla, izinga ukukhiqizwa kanye nokuhlolwa keramoizdely kwenziwe imishini yesimanje izinkampani Italian: Sacmi, bmr, System, ICF, okuyinto kuqinisekiswa izitifiketi. Ngaphezu kwalokho, njalo-ke has laboratory, okuyinto ifakwe ubuchwepheshe bamuva European. Lokhu multi-functional izakhiwo: GABBRIELLI, Instruments bobumba, ASSO Phrinta.
egwadle Ural -, ngaphezu kwakho konke, imvelo impahla enobungane. Ngeke kubangele ukungcola emkhathini, noma ukusabela iguliswa, ngakho kabanzi njengendlela material ezibhekene nazo njengesisekelo ukwakhiwa ayisisekelo.
Ebusweni Tile ku-MCS ibangelwa kakhulu izakhiwo zokusebenza:
Ukumelana eqinile ngenyanga ngenxa ongaphakeme amanzi ukumuncwa futhi ngokuphazima kweso lapho izinga lokushisa;
ukumelana staining ngesikhathi ukusetshenziswa;
ekulondolozeni ukujula umbala nokucacisa figure lonke ekuphileni isevisi;
Ural GRES ekilasini zobumba ngokushesha kuyanda esifundeni. Kuqhamuka isifinyezo Italian Gres porsellanayo, okuyinto uhumusha njengoba "zobumba itshe-sobumba." Ukubunjwa okokusebenza okuhlobene zobumba. yokukhiqiza ubuchwepheshe elisetshenziswa PCL, ngelinye lamadolobha esimanjemanje kakhulu Russian umkhakha sobumba. Izakhiwo kanye sobuhle bayo imikhiqizo izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka itshe yemvelo. Kulokhu, hhayi nje kuphela ukuthi ibukeke egwadle noma ngemabula, kodwa futhi sihambisana itshe yemvelo amandla. TPP setshe abakhiqizi Ural amelana ezindaweni wavuma ezonakalisayo, futhi kwezinye izici ukusebenza kanye umthengi aphakeme 'ukufuna ukukukhanda ngamatshe yemvelo.
Ural zobumba uchungechunge "Standard" uvezwa imibala ethandwa kakhulu. Ibizwa nangokuthi iqoqo "nge-pepper-usawoti" ngenxa zifana ingxube eponymous. Le mikhiqizo kungenziwa ngokuthi cishe phakade: operation eside angeke itjhuguluko engekhe yalungiseka kulimaze kwamanzi, njengoba aliholeli kuwukwephula sibalo.
Imikhiqizo waleli qoqo asetshenziswa ngokuyinhloko:
inhlangano flooring ingaphakathi umhlobiso izinto;
ukubhaliswa isikhala commercial, izikhumulo zezindiza, eziteshini zezitimela;
kokuqeda izindawo zokukhiqiza;
Izinga oyinhloko wale uchungechunge amathayili nomkhiqizi wakhetha imikhiqizo ngenhloso ngaphandle matte.
Ukulungiswa - inqubo ezengeziwe machining eseyibonisile tile. Ngesikhathi esigabeni sokugcina emshinini ohlangothini imiphetho bafa nge ukunemba eshumini amamilimitha angu. Ngemva kwale kwelashwa umkhiqizo etholwe usayizi ngqo (isb 600x600 format Tile has a ukuphambuka nokubekezelela mm 0.4 kuphela) futhi kungaba kakade asetjenziswe laying isigubungelo phansi noma olungaphambili lwesonto ambozwe.
Ural egwadle uchungechunge 600x600 mm - ethandwa kakhulu phakathi abathengi ubukhulu njengoba kuyinto jikelele. Ochwepheshe isitshalo-MCS Ltd. isungule iqoqo elisha izingqimba nge izilinganiso 600x600, ukunyusele ngaphansi brand "izimpi Ural." Lokhu uchungechunge kuyalungiswa, ngokulandelana, has a isilinganiso esinembile kakhulu. Collection ubuyise imibala ezivamile asetshenziselwa mbumbulu umoya, kanye nokubeka phansi.
egwadle Ural: Izibuyekezo
Abathengi abaningi unquma ukusebenzisa egwadle tile esikhundleni enye impahla, ngenxa ukumelana layo amathonya zangaphandle ezimbi. Isichuse akusho bungakhiphi iyiphi intuthu eyingozi, ngisho ne Ukushisa eqinile.
Siyabonga ngetinhlobo letibanti letehlukene amakhasimende ungakhetha ezifanele kunazo umbala umthunzi. Lokhu kuvula up kungenzeka obuhlukahlukene kabanzi izixazululo ekwakhiweni entsha noma kulungiswe izakhiwo ezindala, izakhiwo, izindlela. intengo okungabizi uqeda ukuthandwa ukukhiqizwa kwemikhiqizo-MCS.